Posted by kyawmonkhant on Nov 17, 2010 in News | 14 comments
ီနေ့ မန္တလေးဂေဇက်မှာ ဆူးရဲ့ ပိုက်ဆံမသစ်ရင် လက်မခံတဲ့ ရိုးမဘဏ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်ပီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လကျော်လောက်က ကျနော်ရေးထားပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးမဖတ်ရသေးတဲ့ ကျနော့ စိတ်ကူးလေးကို မျှဝေချင်တာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို တင်ဖြစ်တာပါ။ ကျနော်ကတော့ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ ကျနော်တိုင်နိုင်ငံမှာ နေ့စဉ်လိုလို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့် မိတာပါ။ ဘယ်သူမဆို မိမိငွေကြေးကို တန်းဖိုးရှိရှိ ထိထိရောက်ရောက် အလေအလွင့်မရှိအောင် သုံးချင်ကြပါတယ်။ ဈေးဝယ်တဲ့ အခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြွေမရှိလို့ ပြန်အမ်းတဲ့ သကြားလုံး တစ်ရှူး ဘောလ်ပင် စသည့် မိမိတို့ မလိုချင်သော မလိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို မလိုချင်ဘဲ လက်ခံရပါတယ်။ ပြန်အမ်းနိုင်ရင်လဲ အသေးစားငွေစက္ကူတွေဆို တော်တော်လေးကို စုတ်ပြတ်သတ် ညစ်ပတ်နေပါပြီ။ ကိုင်ချင်စရာကိုမရှိပါ။ တန်ဖိုးတစ်ခုရှိနေလို့သာ လက်ခံရတာပါ။ ပိုက်ဆံလို့တောင် ပြောဖို့မကောင်းတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေပါ ဒါတွေကို ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ သူတို့ပေးတဲ့ ဒေါ်လာကြတော့ နဲနဲပါးပါး နွမ်းနေရင်တောင် ဒီကလူတွေက လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ ကိုယ်ကျတော့ ညစ်ပတ်စုတ်ပြတ်သတ် နေတဲ့ ပိုက်ဆံတွေပြန်အမ်း သူတို့လဲ ဘယ်လက်ခံချင်မှာလဲ။ ရှက်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တန်းဖိုးထားချင်စရာမကောင်းအောင်ဖြစ်နေတာ။ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ဒြဗ်နဲ့ မလိုက်ဘက်အောင် ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းနေပြီလဲဗျာ။
ဟုတ်တယ်..အိမ်မှာ တစ်ရှူးထုတ်တွေ တော်တော်များနေပြီ..
နားလည်သလောက်ပြောရရင် .. အဲဒီ ငွေအနှုပ်တွေကို ပုံနှိပ်ရိုက်နှိပ်ဖို့အတွက် ကုန်ကျစရိပ်က .. ငွေစက္ကူရဲ့တန်ဖိုးထက်များနေလို့ပါပဲ..။
ငွေစက္ကူဆိုတာက .. မှင်သားအကောင်းစားရော။ လုံခြုံရေးကြိုးရော။ ရေစာ(Watermark)ရောပါရတာဆိုတော့… ငွေအကုန်အကျများပါတယ်..။
ငါးပြား၊ ဆယ်ပြား၊ ငါးမူးတကျပ်စေ့ရဲ့ သတ္တူတန်ဖိုးက .. ဒန်အိုးဒန်ခွက်ဈေးထက် နိမ့်တဲ့အခါ အရေကြို ကုန်ကြမ်းလုပ်ခံရသလိုပေါ့..။
ဒီကိစ္စ . အစိုးရမချမ်းသာမချင်း… ရှင်းပေးမယ်တော့မထင်..။
ယူအက်စ်မှာ MacDonaldဆိုင်တွေမှာ အလှူခံပုံးလေးရှိတတ်တယ်..။ ကလေးဖောင်ဒေးရှင်းတွေအတွက်တို့.. ။ရင်သားကင်ဆာအတွက်တို့အတွက် ရံပုံငွေကောက်တဲ့ပုံးလေးတွေပေါ့..။
မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုပလပ်စတစ်ပုံးလေးတွေလုပ်..။ ရေဘေး၊လေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် အလှူငွေအဖြစ်..အဲဒီအစုတ်ပလုပ်တွေ ထည့်ခိုင်းပေါ့..။
ပြီးမှ ..ဘဏ်နဲ့ညှိပြီး ..ငွေထုတ်..။ လှူပလိုက်ပေါ့..။ ၇၅ရခိုင်နှုန်းပဲငွေပြန်ပေးမယ်ဆိုလည်း ဖြစ်တာပါပဲ..။
ဦးလေး ခိုင်ပြောတာ နားတောင် မလည်ဘူး.. ငွေအစုပ်တွေ ထည့်လိုက်ကော.. အကြွေ သုံးစရာ ဘယ်က နေပြန် ဖြစ်လာမလဲ.. ထပ်မရိုက်ဘူးဆို..
ကုသိုလ်ရအောင် ညာတာပါတေးနဲ့ …လှူခိုင်းနေတာဟေ့…။
လူဆိုတာ .. အဲလိုအချိန်ငွေတန်ဖိူး သိပ်မတွက်ဘူး..။ ပလပ်စတစ်ဗူးဖိုးထက် အဆ၁ထောင်မက ရမယ်..။
ယူအက်စ်မှာ လုပ်တော့ လူတော်တော်များများ၈ အကြွေစေ့ မကိုင်ချင်လို့ .. ပစ်ထည့်လိုက်တာပဲ..။
အဲဒါ တနိုင်ငံလုံးပေါင်းရင် .. တနှစ်ဒေါ်လာ သန်း၂၀ရတယ်..။
The RMHC Donation Boxes are one of our biggest ongoing fundraisers. It’s from people like you filling the Donation Boxes with nickels, dimes and quarters. Last year alone, nearly $20 million was collected.
1. If every McDonald’s customer donatedapenny in the Donation Box, it could raise over $116 million to support children in need and their families worldwide.
2. A full Donation Box could letafamily stay together ataRonald McDonald House for up to2nights while their child receives care atanearby hospital.
3. A full Donation Box could provideachild withadental screening inaRonald McDonald Care Mobile.
4. Change in the Donation Boxes can give familiesaplace to rest inaRonald McDonald Family Room, just steps from their child’s hospital bed.
အကြွေတွေ အလုံ အလောက် ရှိလို့ အလှူခံပြီးလည်း လိုအပ်ချက် မရှိတာဖြစ်မှာပေါ့ အဲဒီလို မျိုးလား
ငွေအကြွေရှားပါးမှုကို တို.တွေ မစိုးရဖြစ်မှ ထပ်ပီးအသေအချာ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ … ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏသီဟတေဇသူရ ကျော်မွန်ခန်. ရယ်။ (နောက်တာနော် … နိင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူး :P)
စိန်ဂေဟာတို. ဘာတို.ကတော့ စက္ကူနဲ. ၅၀ တန်၊ ၁၀၀ တန်၊ ၂၀၀ တန်လေးတွေ ရိုက်ပီးတော့ အကြွေပြသနာဖြေရှင်းတာတွေ.တရ်။ အဲဒီပိုက်ဆံနဲ. သူတို.ဆီမှာပြန်ဝယ်ပေါ့။ ဒါတောင် တလောက မြို.တစ်မြို.မှာ အကြွေကို အဲဒီနည်းနဲ.ဖြေရှင်းလို. နိင်ငံတော်ပိုက်ဆံ တုပမှုနဲ. အဖမ်းခံရတရ်ဆိုပဲ။ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လားတော့ မသိဘူး။ ဥာဏ်ရှိရင်တောင် လောင်ချာ ကြောက်ရတယ်။ သနားပါတရ်နော်။ :'(
ဒါကြောင့် ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းဘို့ဈေးနုန်းဖွင့်မယ်ဆိုရင် ဟိုအောက်ဆုံး လက်လီရောင်းမယ့် သူအထိပါ စဉ်းစားပြီး ဖွင့်ပေးနေရပါတယ်၊ဒီအကြွေကိစ္စကိုတော့ ဘယ်သူမှ အပြစ်ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ကျနော်ကတော့ ဈေးဝယ်ရင် ကိုယ်လက်ထဲပါတဲ့ အကြွေနဲ့ကိုက်အောင်တွက်ဝယ်တော့ အိုကေပါ။
မန်းလေးမှာ လဲ မင်းသီဟလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ အလှူခံပုံးတွေထားပေးပါတယ်။
အမ်းတဲ့ ပိုက်ဆံကို မလိုချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စေတနာ ပေါက်လာရင်ဖြစ်ဖြစ လှူလို့ ရအောင်ပေါ့.
ထိုင်းနိုင်ငံ ကုန်တိုက်ကြီးတွေတချို့မှာ စားသောက်ဆိုင်မျိုးစုံရှိတဲ့ ခန်းမကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ ဆိုင်တွေအားလုံးအတွက် ခုံတွေလဲ အများကြီးခင်းထားတယ်။ ဘယ်ဆိုင်က၀ယ်စားစား လွတ်တဲ့ခုံမှာဝင်ထိုင်ရတယ်။ အဲဒီဆိုင်တွေကျတော့ ပိုက်ဆံမသုံးဘဲ ကူပွန်နဲ့ ၀ယ်ရပါတယ်။ ခန်းမကြီးအ၀င်မှာ ကူပွန်လဲတဲ့ ကောင်တာရှိတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့လဲရတယ်။ ကူပွန်တွေပိုနေရင် ပိုက်ဆံနဲ့ပြန်လဲပေးတယ်။ အဲဒီစနစ်လဲ ကောင်းပါ၏။ ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဆိုင်တွေလဲ အဲဒီစနစ်အသုံးပြုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တစုံတခုသောအတိုင်းအတာအထိတော့ အကြွေပြဿနာ ပြေလည်နိုင်ပါသည်။
စိန်ဂေဟာ ပြည်လမ်းက အဲဒီ စနစ်ကို သုံးတယ်လေ.. တုံကင် စနစ်.. ဘယ်သူမှ ထမလဲဘူး မှာချင်တာ မှာ.. ပြီးရင် ဟေ့.. ပိုက်ဆံ ရှင်းမယ်.. ဒီတိုင်းပေးလိုက်တာဘဲ.. စားပွဲထိုးလေးက ကောင်တာပြေး ပိုက်ဆံ နဲ့ တုံကင်လဲ.. ပြီးရင် တုံကင်ကို ဆိုင်တွေပေး.. ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာဘဲ